Boko Haram oo waqooyiga Nigeria ku dilay dad ka badan 60 qof oo aas ku guda jiray. - BBC News Somali
Boko Haram oo waqooyiga Nigeria ku dilay dad ka badan 60 qof oo aas ku guda jiray.
Image caption Boko Haram waxay dagaalka hubeysan waqooyiga Nigeria ka billaaben 10 sano ka hor
Muhammed Bulama oo ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka ayaa wuxuu sheegay weerarkan ugu dambeeyey iney Boko Haram u soo qaadday si ay ugu aarsato 11 dabley oo kooxdaasi ka tirsan oo tuulada ay weerarka ku soo qaadeen looga dilay laba toddobaad ka hor.
Boko Haram, oo lagu micneeyo "Waxbarashada reer galbeedka wa xaaraam" waxay u ololeeyaan Islaamka inuu mamnuucay in laga qayb qaato dhaqdhaqaaqyada siyaasadda iyo arrimaha bulshada xiriirka la leh reer galbeedka. Kooxda ayaa waxay u dagaallameysaa iney dowladda Nigeria ka takhalusaan oo ay abuuraan dowlad Islami ah.
Carruur lagu qafaashay dalka Nigeria